Raysul wasaaraha israaill oo danjiraha Maraykanka u yeeray – The Voice of Northeastern Kenya
Raysul wasaaraha israaill oo danjiraha Maraykanka u yeeray
Star FM December 26, 2016
Raysul wasaaraha Israaiil Benjamin Netanyahu ayaa u yeeray safiirka dalkiisa u fadhiyo mareykanka saacado kadib markii dhamaan danjirayaasha dalalka xubnaha ka ah golaha amaanka ee qaramada midoobay amar lagu siiyay in ay tagaan wasaarada arrimaha dibada.
Safiiradan ayaa loo yeeray kadib markii ay soo baxday xiisad ka dhalatay qaraar Qaramada Midoobay ku dhaliishay israail guriyaha ay ka sii dhisayso degaano ka tirsan dalka Falastiin oo uu weli haysto.
Dan Shapiro, oo ah danjiraha israaill u fadhiyo mareykanka ayanan horay ugu jirin liiska 14 kale oo loo yeeray oo mareykanka u matalo wadamada Ingiriiska, Faransiiska iyo Ruushka si loogu muujiyo sida ay Israel go’aankaa uga xuntahay.
Raysul wasaaraha ayaa horay mareykanka ugu baaqay in uu hor istaago codeynta ka dhan ah dalkiisa .
Safaarada israail uu ku leeyahay mareyakanka ayaa xaqiijisay in loo yeeray Dan Shapiro oo uu la kulmayo raysul wasaaraha.
Jimcadii ayay ahayd markii golaha amaanka ee qaramada midoobay uu markii ugu horaysay tan iyo sanadii 1979 ansaxiyay qaraar looga doonayo israaill in ay joojiso dhismaha ay ka wado degaanada Falastiin.
← Baadi goob weli loogu jiro diyaaraadii burburtay ee Ruushka
Abaanduulaha booliska oo amar ku bixiyay in la shaqaleysiiyo ciidamada keyda →